လမ်း 7: အားလုံး Up ကိုထလော့ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
လမ်း 7: အားလုံး Up ကိုထလော့
ငါတို့ရှိသမျှသည်ထ အကယ်., yeah oh yeah oh (ပြန်ဆို)
ငါမိုက် bro တို့ထိဖို့ထိုက်ပါဘူးသိ
ငါသည်ဤကလောင်တွေနဲ့ဓါတ်ခွဲခန်းများနှင့်တစ်ဦး pad ပါကဗျာလေးများ
ငါနောက်ဆုံးအပြီးသတ်စေခြင်းငှါ, သိမှတ်ကြလော့, ငါနောက်ကျောအချိန်အတွက် '04 မှ thoughLet ရဲ့သွားလာရင်းရေးထားဒါကြောင့်တကယ်မဖြစ်
ငါတွေ့ဆုံခဲ့ 116, လျင်မြန်စွာငါဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ခဲ့သည်
အကြှနျုပျတို့သူ store မှာခဲ့ရုံအရာကိုသိသည်မဟုတ်
ယခုမူကားဤနေရာတွင်ကျွန်တော်တို့ဆယ်နှစ်အကြာတွင်များမှာ, စီးဆင်းမှု သာ. ကြီးမြတ်တယ်
yeah ငါသည်ငါ့ unashamed အမှုထမ်းများအတွက်စကားပြောတာပါ
ဒါကတစ်ဦးစင်မြင့်မထိဘယ်တော့မှဒါပေမဲ့သူတို့ကသူ့ newness အတွက်လမ်းလျှောက်နေတာပါ
ငါတို့ရှိသမျှသည် upThat, ငါ့အိပ်မက်ဖြစ်လိမ့်မယ်မထခဲ့လျှင်
သူကောင်းပါတယ်အကြောင်းမရှိငါတို့ရှိသမျှသည်ထနှင့်ရှင်ဘုရင်အဘို့အရပ်လျက်, အိုပေးသင့် (3X ကို)
ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးမြင့်မားရ​​ှိုးအား bootleg ခရီးစဉ်ထံမှထွက်သွား
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားတွေအတွက်စီးကနေလေယာဉ်ပေါ် sittin မှ
အတစ်ခွင်၌ သာ. ပရိသတ်တွေကျွန်တော်လုပ်မဆိုလိုဘူး
ရေဒီယို station ကကစားအကြောင်းမရှိဘုရားသခငျသညျ '' ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်မဟုတ်
သငျသညျငါသညျသူ၏မျက်နှာရှာဖွေလျက်နေထိုင် prayin တာပါသိ
ထိုအခါငါကတိပေးလိမ့်မယ်, I'ma တုတ်က
သူတို့ကအလုပ်မှာဧဝံဂေလိတရားကိုတစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးသည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့င်သူတို့ကိုပြသ, ထ
ငါဆုတောင်းပဌနာခဲ့ရတယ်ငါ့နှလုံး၌စုတ် feeling တာပါ
မစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်, ကပျောက်ဆုံးသည်မဟုတ်, သူ၏နာမကိုပေးသောချီသည်
Rap ဂီတငါ့ကိုမလိုအပ်ပါဘူး, ရောက်ရှိငါ့ကိုမလိုအပ်ပါဘူး
ခရစ်တော်သည်ငါမလိုအပ်ပါဘူး, ငါခြေဆွံ့သေ​​ာသူကိုရယ်အကြောင်းမရှိ limping တာပါ
အကူးအပြောင်းမှရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်း, homie ယုံကြည်ခြင်းအား realer ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်
ငါထပြည့်ဝင့်, ကိုယ်တော်၌, ငါနေဆဲကိုယ်တော်၌တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်တာပါ
I'ma အောင်မြင်ဖို့လမ်းကို, ဘာမျှမကံကောင်းပါစေမှတက်မယ့်က?
ကိုယ့်အကြှနျုပျကိုကလွင်ပြင်စေနည်းလမ်းတက် switching တာပါ
Tommy • ဒီဇင်ဘာလ 27, 2014 တွင် 10:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါလုံးဝဒီသီခငျြးကိုကိုချစ်, အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်ကျမ်းပိုဒ်! ဂီတကိုလည်းသည်ကြီး, ဒီအယ်လ်ဘမ်အပေါ်သည်အခြားသီချင်းတူသော. Gawvi နှင့်အတူခရီးစဉ် Lee ကယ့်ကိုဤအယ်လ်ဘမ်နှင့်အတူဦးခေါင်းပေါ်လက်သည်း hit.
ဒါဝိဒ်သည် • ဒီဇင်ဘာလ 27, 2014 တွင် 10:52 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Esubalew Chekol • နိုဝင်ဘာလ 21, 2017 တွင် 1:20 ညနေ • ပြန်ကြားချက်